VOA English Lesson 26 Lip စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ By ဒေါ်လှလှသန်း - Myanmar Network
VOA English Lesson 26 Lip စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ By ဒေါ်လှလှသန်း
Posted by Master Learner on April 10, 2012 at 13:05 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီတပတ် English Learning: America Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ တင်ပြပေးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမှာ read my lips, lip service, keepastiff upper lip နဲ့ my lips are sealed တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းမှာ read my lips ဖြစ်ပါတယ်။ Read = ဖတ်ပါ။ My = ကျနော်၊ ကျမ၏။ Lips = နှုတ်ခမ်း တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကျနော်၊ ကျမ၏ နှုတ်ခမ်းကို ဖတ်ပါ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကျနော်၊ ကျမ နှုတ်ခမ်းကပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေကို မှတ်ပါ။ တနည်းဆိုရင်တော့ ပြောတာတွေကို သေသေချာချာ နားထောင်ဖို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အီဒီယံအသုံး နိုင်ငံရေးလောကမှာ ရေပန်းစားလာတာကတော့ အဖေဖြစ်သူ George H. W. Bush က ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ရီပတ်ဘလင်ကန် (Republican) ပါတီရဲ့  သမ္မတကိုယ်စားလောင်းအဖြစ် အမည်တင်သွင်းမှု ခံယူဖို့ လက်ခံတဲ့ ရီပတ်ဘလင်ကန်ပါတီ ညီလာခံမှာ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
And, I'll say, to them, Read my lips: no new taxes.
ထိုစဉ်က သူပြောကြားခဲ့တာကတော့ နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ကျနော်ပြောတာကို မှတ်ထားကြပါ။ ကျနော်အနေနဲ့ အခွန်အသစ်တွေ တိုးမကောက်ဘူးလို့ ဂတိပေးပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက နိုင်ငံကောင်းကျိုးရှေ့ ရှုပြီး ဘာတွေညာတွေ လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုကြတာတွေကတော့ ဓမ္မတာပါ။ အဲဒီ ၁၉၈၈ ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း သူအနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးဘတ်ဂျက် လိုငွေပြမှုကို လျှော့ချရာမှာ ဝင်ငွေအခွန်ကို တိုးကောက်ခဲ့လို့ လူထုကလည်း အစတုန်းက ကောင်းပေကောင်းရဲ့ နဲ့ ကတိတွေ ပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကတိမတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ သူက ဘေလ် ကလင်တန် (Bill Clinton) ကို အရေးရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုစဉ် ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်က သမ္မတလောင်း ဘေလ် ကလင်တန် ကလည်း ဘုရှ် က ကတိပေးခဲ့တဲ့ read my lips စကားကို ကိုးကားပြီး ကောင်းကောင်းကြီး ပြန်ခနဲ့တာကို နိုင်ငံသားတွေ ကြားခဲ့ရတာမို့ ဒါဟာ သင်ခန်းစာယူစရာလို့ ဆိုရပါမယ်။
Read my lips. Once I become your President, I will do my best to serve the country.
ကျနော်ပြောတာကို ကောင်းကောင်းကြီး မှတ်ထားကြပါ။ ကျနော် သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံအကျိုးအတွက် အကောင်းဆုံး သယ်ပိုထမ်းဆောင်သွားမှာပါ။
ဒုတိယတင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းမှာ lip service ဖြစ်ပါတယ်။ Lip = နှုတ်ခမ်း။ Service = ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်း တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နှုတ်ခမ်းကတဆင့် ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ တွဲဖက်သုံးလေ့ရှိတဲ့ ကြိယာ (verb) ကတော့ Pay နဲ့ Give တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Give lip service သို့မဟုတ် Pay lip service တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အီဒီယံဆိုတဲ့ သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း အပြောသက်သက်၊ လက်တွေ့မပါတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အပြောကတော့ ရွှန်းရွှန်းဝေနေပေမယ့် တကယ်လုပ်ပေးမလားဆိုတော့ မလုပ်ပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကျမတို့မြန်မာမှာတော့ လောကွက်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် စိတ်ကမပါဘဲ နှုတ်ကသာ ကတိပေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
The authorities pay lip service to raise the pension salaries. So far, we haven’t seen any results.
အာဏာပိုင်တွေကတော့ ပင်စင်လစာတွေ တိုးပေးပါမယ်လို့ လောကွက်ချော် ပြောခဲ့တယ်။ အခုထိတော့ အဖြေထွက်လာတာ မတွေ့ရသေးဘူး။
နောက်တင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းမှာ keepastiff upper lip ဖြစ်ပါတယ်။ Keep = ထားသည်။ A = တခု။ Stiff = တောင့်တင်းသော၊ မလုပ်ဘဲနေသော။ Upper = အပေါ်။ Lip = နှုတ်ခမ်း တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အပေါ်နှုတ်ခမ်း မလှုပ်ဘဲ ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအသုံးက ဗြိတိန်အင်ပါယာခေတ်က ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သားတွေဟာ သူတို့အနေနဲ့ ဝမ်းသာဝမ်းနဲဆိုတဲ့ အမှုအရာကို မပြဘဲ မျက်နှာထား တည်တည်ထားရာကနေ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပေါ်နှုတ်ခမ်းကို မလှုပ်ဘဲထားလို့ရှိရင် မျက်နှာက ငိုလို့ရယ်လို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာလည်း သောတရှင်များ အသိပါ။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကိုယ့်ခံစားချက်ကို မပြဘဲ၊ စိတ်ကိုထိန်းထားတာ၊ တောင့်ခံထားတာ၊ မျက်နှာထားတည်ထားတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
The earthquake victims tried hard to keepastiff upper lip although they were facingalot of hardships.
မြေငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ကြရသူတွေကတော့ ဒုက္ခတွေ ပင်လယ်ဝေနေကြပေမယ့် စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ထိန်းထားကြတာ တွေ့ရတယ်။
နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းမှာ my lips are sealed ဖြစ်ပါတယ်။ My = ကျနော်၊ ကျမ၏။ Lips = နှုတ်ခမ်း။ Seal = ပိတ်ထားသည် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျနော်၊ ကျမရဲ့  နှုတ်ခမ်းကို ပိတ်ထားသည် ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သွယ်ဝှက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှင်းပါတယ်။ သူများ မသိစေချင်တဲ့အကြောင်း လျှို့ ဝှက်တဲ့အကြောင်းတွေကို ဘယ်သူကိုမှ မပြောပါဘူး၊ နှုတ်လုံပါတယ်လို့ ပြောတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
Don’t worry, John. My lips are sealed. I will not tell anyone of your financial problems.
စိတ်မပူပါနဲ့ John။ ကျနော် နှုတ်လုံပါတယ်။ ခင်များရဲ့  ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာအကြောင်း ကျနော်ဘယ်သူကိုမှ မပြောပါဘူးဗျာ။